Vinícius Jr oo guul muuhiim ah farta ka saaray Real Madrid kaddib markii ay ka adkaadeen kooxda Sevilla… +SAWIRRO – Gool FM
(Madrid) 28 Nof 2021. Vinícius Jr ayaa guul muuhiim ah farta ka saaray Real Madrid kaddib markii ay kaga adkaadeen kooxda Sevilla oo ku soo booqatay garoonka Santiago Bernabéu 2-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Real Madrid iyo Sevilla ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 12-aad kooxda martida ahayd ee Sevilla ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Rafa Mir kaddib markii uu caawin ka helay Marcos Acuña.
Laakiin 32 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Real Madrid ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay weeraryahankooda reer France ee Karim Benzema.
87 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Vinícius Jr oo caawin ay kaga timid saaxiibkiis Militao ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda cad cadka ee Los Blancos.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 2-1 ay kaga adkaatay Real Madrid kooxda Sevilla oo ku soo booqatay garoonka Santiago Bernabéu, Los Blancos ayaa haatay ku hoggaamineysa horyaalka La Liga 4 dhibcood waxayna leedahay 33 dhiboocd.